BISHII FEBRAAYO, KORORKA QIIMAHA CAANAHA AYAA LA FILAYAA - UKRAINE
Sida laga soo xigtay Agaasimaha Ururka Iskaashatooyinka ee Ukrayna ee Aleksey Doroshenko, dhamaadka bisha Febraayo, kororka sicirka alaabta caanaha ee Ukraine ayaa kordhin doona 3%. "Maanta, waxaan ku aragnaa" sicirrada "qiimaha caanaha laga dhoofiyo Cuntooyinka dhirta ayaa isku dayaya in ay yareeyaan qiimaha iibka caanaha, taas oo ay ugu wacan tahay, in la joojiyo sicirka qiimaha caanaha ee dalka Ukraine, si kastaba ha ahaatee, beeraha si adag ayaa looga hortagayaa hindisahan, laakiin hoos u dhaca qiimaha Kooxdani waa inaysan aheyn mid la filayo, "ayuu khabiirku sheegay.
Alexey Doroshenko ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in qiimaha badeecadda ugu dambeysa ay ka mid tahay maaha oo kaliya qiimaha iibka caanaha, laakiin sidoo kale mushaharka shaqaalaha ee shirkadaha, oo ay weheliso kharashka gaaska, korontada iyo biyaha. Sababtoo ah xaqiiqda ah in qiimaha dhammaan kuwan oo ku yaal Ukraine ay sii kordheyso, qiimaha caanaha ayaa sidoo kale kordhin doona. Doroshenko ayaa la wadaagay ra'yigiisa in ay faa'iido badan u tahay dadka reer Ukraanka inay soo saaraan jiiska dibadda iyo joojiyaan soosaarka gudaha. Cunto noocan oo kale ah waxaa lagu wadaagi karaa jaangooyo, haddii caanaha laga sameeyo caanaha, bilaha soo socda, ha joojin kobcintooda.